U-EMILY RATAJKOWSKI KUNYE NOMYENI USEBASTIAN MCCLARD NGABAZALI - IINDABA
Eyona Iindaba Imodeli uEmily Ratajkowski wamkela uMntwana wokuqala kunye noMyeni
Imodeli uEmily Ratajkowski wamkela uMntwana wokuqala kunye noMyeni
'Asizukubazi ubuni de umntwana abe neminyaka eyi-18,' wabhala ngaphambili kwisincoko. I-Kevin Mazur / i-Getty Izithombe zoMbutho woKhetho lwabaGxeki Ukuhlaziywa kuka-Mar 11, 2021
Imodeli uEmily Ratajkowski kunye nomyeni wakhe uSebastian Bear-McClard bamkele umntwana wabo wokuqala kunye, utyhile ngoMatshi 11, 2021. 'USylvester Apollo Bear uzimanye nathi,' utshilo uRatajkowski kwi-Instagram. 'I-Sly ifike nge-3/8/21 ngeyona ntsasa i-surreal, intle kwaye izaliswe luthando ebomini bam.' Ifoto ehamba nayo ibonisa umama wokuqala onomdla emntwaneni wakhe.
Jonga le post kwi-Instagram Iposi ekwabelwana ngalo nguEmily Ratajkowski (@emrata)
URatajkowski wabhengeza ngokukhumbula ukukhulelwa kwakhe kwisincoko esimalunga nesini ngo-Okthobha u-2020. Kwisiqwenga se Vogue , Intombazana engekho Umdlali weqonga uthethe ngobude malunga nolindelo lwesini kunye nendlela yena nomyeni wakhe abacwangcise ngayo ekuthatheni indlela 'yokuqhubela phambili' nendlela abakhulisa ngayo umntwana wabo.
Njengabazali abaninzi, uRatajkowski wazifumana evuyisana lonke ixesha lokukhulelwa kwakhe emva koko wabuza umbuzo: 'Ngaba uyayazi into oyifunayo?' Esi sibini, sidibene, saqulunqa impendulo: 'ngekhe sazi isini de umntwana abe ne-18 kwaye baya kusazisa ngoko.'
Kumntu onobukho beendaba zosasazo, uRatajkowski ukwachukumisile kwi-algorithm ekujoliswe kuyo kwi-Instagram wayenzelwe umxholo wobuzali, kubandakanya ukungqubana kwesini ukuveza amaqela. 'Kuzo, izibini ezixhalabileyo zimi ziinyawo ezimbalwa ngaphandle, zijonge kakubi kwikhekhe elikhulu okanye ibhaluni enqunyanyisiweyo,' ubhale watsho. Ndiyothuswa luxinzelelo lwezi vidiyo. Nangona ndingababoni, ndiyabuva ubukho babaphulaphuli babo-amalungu osapho kunye nabahlobo abasemva kwee-iPhones zabo-njengoko esi sibini sincuma ngokungcangcazela, sizomeleza ngaphambi kokuba sihlasele. Ukubabukela baziva bengenasimilo, ngokungathi ndibukele into eyimfihlo kakhulu. '
Kwimodeli, uhambo lwakhe lokukhulelwa luchazwe 'njengelolo elililolo,' kwaye 'yinto eyenziwa ngumntu yedwa, ngaphakathi emzimbeni wakhe, nokuba ithini na imeko yakhe.'
'Ngaphandle kokuba neqabane elinothando kunye nabahlobo abaninzi ababhinqileyo abakulungeleyo ukwabelana ngeenkcukacha ezimnandi zokukhulelwa kwabo, ekugqibeleni ndindedwa nomzimba wam kula mava,' utshilo uRatajkowski. 'Akukho mntu unokuziva kunye nam-iintlungu ezibukhali ezisesiswini sam ezantsi ezithi zivele zingabikho ndawo ngelixa ndibukele imovie okanye ubunzima obunzima bamabele am ngoku andibulisayo into yokuqala ntsasa nganye. Umyeni wam akanazimpawu zomzimba ekukhulelweni 'kwethu', esinye isikhumbuzi sendlela anokuba ngayo amava omfazi kunye nendoda ebomini. '
URobert Kamau / GC imifanekiso
Esi sibini singabazali ngaphezulu kweminyaka emithathu emva kokuba esi sibini sivelile ngoFebruwari 2018. Ngelo xesha, imodeli ibhale kwimithombo yeendaba zentlalo: 'Nditshatile namhlanje.' URatajkowski kunye no-Bear-McClard batshintshe izifungo kumtshato wenkundla yaseNew York. Kumsitho oqhelekileyo, umtshakazi wayenxibe ibhulukhwe emthubi, eyayinjalo kanye engaqhelekanga Njengendandatho yokuzibandakanya ngamatye amabini, ebonisa ukuma kweepare kunye ne-emerald-cut cut.
URatajkowski kunye nomyeni wakhe babengabahlobo kuqala, kwakude kudala ngaphambi kokuba bavuke. 'Bonke babekwiqela labahlobo,' uxelele umthombo ngeveki. 'Wayengenguye owasemzini.'
iperile kunye neqela lomtshato wedayimane
uyilo lokulala ngobudoda
Neiman marcus umtshato weendwendwe zomtshato
ukufundwa komtshato ongengowenkolo
ezona zifungo zomtshato zakha zeviwa